ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာလေးတစ်ခုပါ...ဘာလဲဆိုတော့ online donation လိုမျိုး.ကျွန်တော်တို့ MZ မှာလည်း donation လုပ်ဖို့ပါ...ကျွန်တော်တို့ မန်ဘာတွေလည်း စည်းစည်းလုံးလုံးဇြစ်သွားမယ် အပြင်မှာမတွေ့ ဘူးသေးတဲ့ မန်ဘာများလည်း ရင်းနှီးသွားမယ် နောက်တစ်ခုက ကုသိုလ် လည်းရမယ်.လောလောဆယ်တော့ ရန်ကုန်ပတ်၀န်းကျင် တစ်၀ိုက်ပေါ့..ကျွန်တော်တို့တွေ စုစုစည်းစည်းနဲ့ အလှူလုပ်ကြမယ်..မန်ဘာတွေလည်းအကုန်မြင်တွေ့ ရင်းနှီးသွားကြမယ်...
ကျွန်တော်တို့ မျက်စိထဲမြင်ယောင်ပြီး ပျော်နေပါတယ်:D
ဒီတော့ မန်ဘာများအားလုံးလည်း လုပ်သင့် မလုပ်သင့် ပါ၀င်ဆွေးနွေးပေးကြပါ....:77::77::77:
တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်ပါ့မယ် :6:
ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ အပြင်မှာလုပ်ထားကြတဲ့ Google Group မှာဘဲ ဒီလို ကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးကြတာ ငွေကြေးကောက်ခံတာတွေ လုပ်ကြစေချင်ပါတယ်။
မန်ဘာတွေ အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ ဒီကိစ္စလေးကိုတော့ ချွင်းချက်အနေနဲ့ ဒီမှာပဲ လုပ်ပါရစေလား ကိုဒီဘီရေ.. ကျန်မန်ဘာတွေပါ သိစေချင်လို့ပါ.. Google Group မှာကျတော့ မ၀င်ထားတဲ့ မန်ဘာတွေ အနေနဲ့ မသိရတော့ဘူးပေါ့... ကျန်တဲ့ ပိုက်ပိုက်ကောက်တဲ့ ကိစ္စတွေ၊ ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာတွေကိုတော့ Group မှာပဲ ဆွေးနွေးပါ့မယ်..
ကျွန်တော်ကတော့ အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါတယ်။ ကိုကို၀င်းပြောတာမှန်ပါတယ်။ ဒီက တစ်ချို့မန်ဘာတွေ မသိသေးလို့...ပါ။ ကျန်တဲ့ ပိုက်ဆံကောက်တာတွေ...၊ ဘာတွေညာတွေကျတော့.... group မှာ ဘဲ လုပ်တာကောင်းပါတယ်:D:)ဒီမှာ က မန်ဘာတွေ၊
အသစ်၀င်လာတဲ့ မန်ဘာတွေ သိရအောင်လို့ကြော်ငြာတာပါ။:P
ဟုတ်ပြီဗျာ .. အလှူရှိရင်တော့ လက်တို့လိုက်ဗျို့ ဖြစ်နိုင်ရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သင်တန်းတစ်ခု သွားသင်ပေးတာတို့၊ စုပေါင်းသွေးလှူတာတို့ .. အဲဒါမျိုးလုပ်ဗျာ
ကောင်းပါတယ်ဗျာ.ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလိုလေး လုပ်ဖို့ ထောက်ခံပါတယ်. ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်. မန္တလေး က မမ်ဘာ များ အတွက်လည်း လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်.. ရန်ကုန်လာဖို့ရာ ဆိုတာ. မလွယ်သေးလို့ ပါ..
ဘုန်းကြီးကျောင်း ပညာရေးတို့ မိဘမဲ့ကျောင်းတို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အလှုရှိက လက်တို့လိုက်ပါဗျာ။
ဖြစ်နိုင်ရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သင်တန်းတစ်ခု သွားသင်ပေးတာတို့၊ စုပေါင်းသွေးလှူတာတို့ .. အဲဒါမျိုးလုပ်ဗျာ
ဒီအကြံလေးက ပိုပြီးလက်တွေ့ကျသလိုပဲဗျ။အချိန်ပဲ၇င်း၇မယ်။အမ်ဇက်မှာ က စာသင်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေလဲ၇ှိနေပြီးသားပဲလေ။အွန်လိုင်းကနေ လက်တွေ့နယ်ထိဆင်းဒါနပြုနိုင်တာပေါ။ အွန်လိုင်းတက်ဖို့ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ အကျိုးရှိသွားတာပေါ့။ကိုယ့်စား၇ိတ်ကိုယ်စားပြီးတော့တော့သင်ရမှာပေါ့နော်(အနော်ကတော့ အင်တာနက်အီးမေးလောက်ပဲ၇တယ်နော်:d:d )
အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ အကြံပါပဲ။ အလှူအတန်းလုပ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်ပဲ တက်နိုင်တက်နိုင်၊ ဘယ်လိုပဲ လှူလှူ ကောင်းပါတယ်။ အားပေးပါတယ်။ တခုတော့ ရှိတယ်ဗျ။ တာ၀န်ယူပြီး ဦးဆောင်တဲ့ လူ တော့လိုတယ်။ အဲ့ဒီ သူက တော်တော်လေး ပင်ပန်းလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး ခေါင်းလည်း တော်တော်ခံရလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ တာ၀န်ကို ယူနိုင်တဲ့ သူ ရှိဖို့တော့ လိုတယ်။ ငွေကြေးကိစ္စတွေ ပါလာတော့ ပိုပြီး ဆိုးတာပေါ့ဗျာ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အားပေးပါတယ်ဗျို့။
သွေးလှုဖို.ကိုတော. ကျွန်တော်လညး် အားပေးပါတယ်။ တကယ်လှုဖြစ်ရင် ကျွန်တော် လည်းလှုပါ.မယ်။ ကျွန်တော်က လေးလ တစ်ကြိမ်သွေးလှုနေကြပါ။သွေးလှုတဲ. အလုပ်က ရရှိတဲ.သူတော.မသိဘူး။ လှုလိုက်ရတဲ.သူကတော. တစ်ပတ်လောက် ပီတိဖြစ်လို.မဆုံးဘူး။
ကျွန်တော် အခုတွေးထားတာ တစ်ခုပါ...ဖြစ်လာမလာတော့မသိသေးပါ..
ကျွန်တော်တွေးထားတာတော့ ခုလာမယ့် လ ၁ ရက်နေ့ တန်ဆောင်တိုင်မှာ..
ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့...အများကြီးတော့မမှန်းထားပါဘူး တနိုင်တပိုင် လုပ်မယ်လို့ တော့
အင်း...ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်.. ဖျက်လိုဖျက်ဆီးမဟုတ်ဘူးနော်. အအေးတိုက်ရင် ဘယ်သူတွေ ဦးဆောင်ပြီးလုပ်ကြမလဲက အရင်လိုလာပြီ.. ဒီတော့ group ကိ်ုသာလာခဲ့လိုက်ပါ.. အဲ့ဒီမှာပဲပြောကြတာပေါ့.. ကျွန်တော်လဲ ကိုဒီဘီကြီးကို ပြောပြီးသားဆိုတော့လေ.. ဒါကြောင့် group ကိုလာပါခင်ဗျာ.. အဲ့ဒီမှာ ပြောကြပေါ့.. သိတဲ့သူတွေ လည်း သိကြမှာပါ.. ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီ့နေ့ စာမေးပွဲရှိသဖြင့် မတက်ရောက်နိုင်ပါခင်ဗျာ.. လုပ်တော့လုပ်ချင်သား.. ( ကုသိုလ်ရဖို့ကံမပါဘူးထင်တယ်.. မရဖို့ကံဆိုရင်တော့ ထိပ်ဆုံးကပဲ.. ( (
အရင် စုပေါင်းသွေးလှူတာလေး လုပ်ကြရင် မကောင်းဘူးလား...
နင့်သွေးကို သူများအလှူမခံရဲဝူးတဲ့ :p:p :d
That Great Idea........
သွေးလှုမယ်ဆိုလည်း ဘယ်နေ.လှုမလည်း ဆို တာ plan ဆွဲ ကြမလား။
ကျွန်တော် က တော. ပြည်သူ ဆေးရုံကြီးမှာ လှုနေကြပါ။
ကျွန်တော် က ဘယ်နေရာမှာပဲလှုလှု လိုက်ပါ.မယ်။
ကောင်းပါတယ် အကို အခုလိုပြောပေးတာကို...ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေ ဆွေးနွေးတာတွေကို
Group မှာလာရောက်ဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ် အကို....
ဒီမှာပါခင်ဗျာ.. Group Address ပါ ၁.၁.၀၉ အတွက် ဆိုတာလေးမှာ ၀င်ရေးပေးပါ.. Reply ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေါ့..